Energy saving tips (electricity) – Sein Mya Lifestyle
Energy saving tips (electricity)
ပူတယ် အိုက်တယ် ဆိုပြီး အဲကွန်းခန်းထဲ တနေကုန် နေလိုက်တာနဲ့ တကယ်အပူပျောက်ရဲ့လား?
ပိုဆိုးလှတဲ့ အပူတွေကို လွှတ်နေတာနော်။ It’s notasolution.
တနွေလုံး ပူတယ် ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေတွေ့တယ်။
ဒီလပိုင်း မီးတွေပျက်တယ် ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေ တွေ့တယ်။
ကိုယ်လည်း ရန်ကုန်မှာပဲနေလို့ ဒါကို ဖြတ်သန်းနေရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှတော့ မပြောမိအောင် နေခဲ့တယ်။
လူတိုင်း ဖြစ်နေရတဲ့၊ ခံစားနေရတဲ့ ကိစ္စမို့လို့။
မြို့ကြီး ပြကြီးသားတွေဖြစ်နေလို့ ပူတာနဲ့ မီးပျက် နှစ်ခုက မခံစားနိုင်ဆုံး ကိစ္စနှစ်ခုဖြစ်လေတော့ မီးပျက်လေတိုင်း အသုံးမကျဘူးလို့ အပြောများတဲ့ EPC က အဆဲခံရတာ နှစ်တိုင်းပေါ့။ မှန်ရာပြောရရင်တော့ ကိုယ်က ဒီနှစ်ခုစလုံးကို ဒါလည်း တနေ့ ပြီးသွားမှာလို့ တွေးပြီး ခံနိူင်ရည်ရှိတဲ့ လူစားထဲ ပါ,ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပူတာနဲ့ မီးပျက်တာကို ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းလေး
လျှော့ချနိူင်ဖို့၊ မကျန်းမာတဲ့ တိုင်းပြည်ကလေးကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ်တွေလို ပြည်သူတွေကလည်း နိူင်တာလေး တခုခု ကူနိူင်ပါတယ်လေ။
— ရေမသုံးတဲ့ အခါ ရေပိုက်ခေါင်းပိတ်ဖို့, pressure pump တွေ မလိုရင်ပိတ်ထားဖို့
— လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးကို တနေ့လုံး ပလတ်ထိုးထားပြီး မပူထားဘဲ ဆူတာနဲ့ ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်သိမ်းဖို့
— water cooler မလိုရင်လည်း မသုံးကြဖို့, ပိတ်ထားကြဖို့
— တပါတ်မှာ/ တရက်မှာ ကိုယ့်ကား နဲ့ သွားလာချိန် အကြိမ်ရေလေးလက်ရှိထက် လျှော့သုံးဖို့
— မီးအသုံးပြုဖို့ မလိုတဲ့ နေရာက မီးမှန်သမျှ ပိတ်ပေးဖို့
— Hair Dryer လျှော့သုံးပေးဖို့ ( မမတွေတွက် ခေါင်းလျှော်ပြီး အိမ်မှာပဲနေမယ် အလှပြစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှ လို့လည်း ဖတ်ပေးလို့ ရပါတယ်နော်၊ ကိုယ်ကတော့ ဆံပင် လှတာမလှတာမသိ Dryer မသုံးဖြစ်ဘူး)
— အိမ်သာထဲက Hand Dryer ကို အသုံးမပြုဘဲ ရိုးရိုးသာ လက် အခြောက်ခံပေးဖို့
— အဲကွန်း အသုံးမပြုတိုင်း ပိတ်ပေးဖို့။
အခန်းလွတ်ကြီးတွေမှာ အကြောင်းမဲ့ အဲကွန်းတွေ ဖွင့်ထားတာတွေ့ရတာ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ အရမ်း ရင်နာရပါတယ်နော်။
— ကိုယ့် အလုပ်၊ ကျောင်း၊ အိမ်ရဲ့ — အိမ်သာ, အခန်းတွေမှာ မီးပိတ်, ရေပိတ်, အဲကွန်း အသုံးမလိုရင် ပိတ်ဖို့ သတိပေးတဲ့ ပုံ, စာသားလေးတွေ ကပ်ထားဖို့
— အိမ်က electronic အသုံးအဆောင်တွေ ပျက်လို့ အသစ်ပြန်ဝယ်ပြီဆိုရင် energy saving household electronic ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ အစားထိုး ဝယ်ဖို့
— Tank ပါတဲ့ Water heater ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်က အရမ်းကို ဆွဲအားများတယ်လို့ ဖတ်ထားဖူးတာကြောင့် နေ့စဉ် ရေပူစက်နဲ့ ရေချိုးသူများက တတ်နိူင်ရင် ရေအေးလေးနဲ့ ရေချိုးတဲ့ အချိန်လေးကိုလဲ တပါတ်မှာ နည်းနည်းစီလောက် ကျင့်ပေးဖို့
— ပိုက်ဆံတတ်နိူင်တဲ့လူတွေဟာ smart thermostats လိုမျိုး စက်လေးတွေ ဝယ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ နေ့စဉ်အမြဲ စွမ်းအင်တွေကို ဘယ်လိုသုံးနေတယ်၊ ဘယ်လို save လုပ်ရမလဲ ဆိုတာလေးတွေကို တွက်ချက် တိုင်းတာ စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ စက်လေးတွေရဲ့ performance အကြောင်း သိချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် google ကြည့်ကြပါနော်။
— ညဘက်ဆို လမ်းမီးတွေ သုံးလေးချောင်းထွန်းမယ့်အစား တစ်ချောင်းလောက်ပဲ ထွန်းပေးတာမျိုး, ဒါမှမဟုတ် လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာနေတာဆို လမ်းမီး, ဝရံတာမီးတွေပိတ်အိပ်တာမျိုး
— Lift နဲ့ တက်မယ့် ဆင်းမယ့်အစား လှေခါးနဲ့ ဆင်း/တက် လည်း သတိထားသုံးပေးဖို့
— တက်နိူင်ရင် Solar စွမ်းအင်သုံး ပစ္စည်းလေးတွေ လဲသုံးဖို့
ဒါလေးတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ကိုယ်တွေလို ဘာမှ နားမလည်တဲ့ လူတွေကလည်း တနည်းအားဖြင့် ကူညီပေးရာရောက်ပါတယ်။
ကိုယ် ခုပြောတာကို ဖတ်မိတဲ့ လူတွေက ကိုယ်သိပြီးသား ကိစ္စလေး ကို သတိလေး ပြန်ရပြီး ကျင့်သုံးနိူင်ဖို့ သတိပေးဖို့ စိမ်းမြနှိုးဆော်စာ ကဏ္ဍကနေ မီးပျက်နေတုန်းလေး ရေးလိုက်ပါတယ်။
ecocitizen ecoconscious energysaving myanmar slowliving
‘သဘာဝနဲ့ energy ယူပါ’